Cheap Twin ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine Ngwa na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine?
Ugboro abụọ-ịghasa Extrusion granulation igwe bụ teknụzụ granulation ohuru dị iche na granulation ọdịnala, nke enwere ike iji ya na nri, fatịlaịza na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Granulation bụ usoro dị mkpa karịsịa maka akọrọ ntụ ntụ. Ọ bụghị naanị na-ekpebi uka nke fatịlaịza granular, kamakwa metụtara ogo na ọnụ ahịa ngwaahịa fatịlaịza.
Ọrụ cikpụrụ nke Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine
Nke a pelletizing ọrụ nke Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine A na-emewanyewanyewanye nke ọma site na ọnọdụ ọrụ pụrụ iche na-asọpụta ma na-adị n'ime mpaghara ahụ. Nke mbụ, na ntụgharị ntụgharị nke okpukpu abụọ, ihe ndị dị na mpaghara extrusion na-agbapụta ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na ịkwa osisi ugboro ugboro iji mee ka ihe gbasara nke puru omume jikọtara n'etiti mkpụrụ ndụ nke ihe. Nke abuo, ihe ndi ahu na-adaba ma na-adigide na mpaghara extrusion, mee ka mgbatị extrusion na-ebili ma kwusi na steeti di elu. Ọnọdụ okpomọkụ nke akụkụ extrusion dị elu nwere ike ịrị elu karịa 75 ℃ ngwa ngwa. N'otu aka, ihe nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ na-ezute ọnọdụ granulating zuru oke. N'aka nke ọzọ, mmetụta yiri nke siri ike gbanwere ngwangwa ngwongwo nke ihe, yabụ na-eme ka ogo na nsogbu dị iche iche dị elu site na ebufe ọkụ na nrụgide dị elu iji nweta ngwaahịa fatịlaịza dị elu.
Uru nke Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine
(1) Pụrụ ịdabere na arụmọrụ na elu granulating ọnụego, ezi granule ike na elu nnukwu njupụta
(2) Nnukwu mgbanwe maka ngwa.
(3) Ọ dịghị mbibi mmetụta na ihe mejupụtara na ala na-arụ ọrụ okpomọkụ.
(4) The granulation emechara site na nrụgide, ọ dịghị mkpa ọ bụla ihe nragide, ọ nwere ike ikwe nkwa ịdị ọcha nke ngwaahịa.
(5) The granulator nwere kọmpat Ọdịdị, mfe mmezi na ndozi
(6) Akụkụ ndị na-akwọ ụgbọala bụ nke ngwongwo alloy dị elu, igwe anaghị agba nchara, titanium, chromium wdg, bụ nke na-egosi abrasion, ihe na-emebi emebi, na-egosi oke okpomọkụ, ma nwee ndụ ogologo oge.
Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine Video Display
Ejima ịghasa Extrusion Fatịlaịza Granulator Machine Model Nhọrọ
Die Oghere dayameta
N'ozuzu Size (L × W × H)
Nke gara aga: Ewepụghị-anwụ Extrusion granulator
Osote: Ọkara Organic Fatịlaịza Ihe Iji Crusher
Okwu Mmalite Gịnị bụ Cyclone Powder ustjá mkpoko? Cyclone Powder Dust Collector bụ ụdị ngwaọrụ iwepụ ájá. Onye na-achikota uzuzu nwere ikike ichikota nke uzuzu nke nwere uzuzu ya na otutu ihe di ya. Dị ka ịta ahụhụ nke ájá, a pụrụ iji ọkpụrụkpụ nke ájá mee ihe dị ka ájá mbụ ...